राती बारम्बार पिसाब आइरहन्छ ? यो गम्भीर रोगको लक्षण हुनसक्छ, यसबाट कसरी बच्ने ? | Ratopati
के तपाईंलाई राती बारम्बार पिसाब आउँछ ? यो नोक्टुरिया पनि हुनसक्छ । आधा रातमा बारम्बार शौचालय जानुपर्ने समस्यालाई नोक्टुरिया भनिन्छ । यो समस्या धेरैजसो ५० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका मानिसमा यस्तो समस्या देखिने गर्छ तर थुप्रै कारणले यो कम उमेरमा पनि हुनसक्छ ।
अमेरिकाको नेशनल हेल्थ सर्भिस (एनएचएस) को एक रिपोर्ट अनुसार राती बारम्बार पिसाब लाग्नु युरेथ्रा अर्थात् मूत्रमार्गमा बढ्दो ट्युमरको् पनि कारण हुनसक्छ । वास्तवमा नोक्टुरिया प्रोस्टेट क्यान्सरको उपचारमा पनि प्रयोग हुने रेडिएशनको साइड इफेक्टको कारण पनि हुनसक्छ । विशेषज्ञका अनुसार यदि राती तपाईं दुई पटक भन्दा बढी शौचालय जानुहुन्छ भने यो ठूलो रोगको संकेत हुनसक्छ ।
सुन्दा यो साधारण समस्या लाग्ला तर बारम्बार निद्राबाट उठेर शौचालय गएका कारण निद्रा खराब त हुन्छ नै यसले पछि गएर तनाव, चिडचिडापन र थकानजस्ता समस्या पनि हुन्छन् । यदि यस्तो समस्या तपाईंलाई पनि छ भने डाक्टरको सल्लाह पक्कै पनि लिनुहोस् ।
नोक्टुरिया के हो ? यस्ता समस्या क–कसलाई देखिन्छ ?
नोक्टुरिया पोस्टेट क्यान्सरको लक्षण हुनसक्छः
– प्रोस्टेट पुरुषको मूत्रनली नजिकै पाइने एउटा ग्रन्थी हो ।
– साधारणतया प्रोस्टेट क्यान्सरका लक्षण धेरै समयपछि देखिन्छ ।
– प्रोस्टेटमा ट्युमर भएका कारण युरिन ट्युबमा दबाब पर्छ ।
– यस्ता मानिसलाई दिनको तुलनामा राती बारम्बार पिसाब लाग्छ ।
– थुप्रै पुरुष यो रोगसँगै लामो समयसम्म उपचार बिना नै बसिरहेका हुन सक्छन् ।
– यदि तपाईंमा पनि यस्तै समस्या देखिएको छ भने डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस् ।
नोक्टुरिया यी रोगका कारण हुने गर्छः
मुटु र मृगौलाको समस्याः
राती मृगौलामा असाध्यै धेरै तरल पदार्थ जम्मा हुने गर्छ, यसैकारण बारम्बार शौचालय जानुपर्ने स्थिति निम्तिन सक्छ ।
गर्भावस्थामा पाठेघर ठूलो हुन थाल्छ जसका कारण पिसाब थैलीमा दबाब बढ्ने गर्छ र बारम्बार शौचालय जानुपर्ने हुनसक्छ ।
यो अवस्थामा असाध्यै धेरै प्यास लाग्छ । राती बारम्बार पिसाब लाग्छ ।
उच्च रक्तचापको औषधीले मृगौलामाथि अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहिर निकाल्नका लागि दबाब दिने गर्छ । यसकारण राती बारम्बार शौचालय जानुपर्ने स्थिति पैदा हुन्छ ।
नोक्टुरिया यी कारणले पनि हुनसक्छः
सुत्नु अघि धेरै पानी, रक्सी वा क्याफिनयुक्त पेय पदार्थ लिनु
पिसाब थैलीमा संक्रमण वा अति सक्रिय हुनु
पिसाब थैलीमा पत्थरी हुनु ।
निद्राबाट ब्यूँझने वा अबेर रातीसम्म निद्रा नलाग्नुका कारण
यस्तो गल्ती गर्नबाट जोगिनुहोस्ः
राती बारम्बार शौचालय जानबाट बच्नका लागि कम पानी पिउनु ।
पर्याप्त मात्रामा पानी नपिएका कारण कब्जियत हुनसक्छ ।
यसबाहेक पिसाब थैली खुम्चिन्छ र शौचालयको समस्या बढ्छ ।
उमेरसँगै बढ्छन् यी समस्याः
५० देखि ५९ वर्षका दुई महिलामध्ये एक महिला र तीन पुरुषमध्ये एक पुरुष नोक्टुरियाका समस्याबाट पीडित हुन्छन् ।
८० वा सोभन्दा बढी उमेरका १० महिलामध्ये सात महिला र १० पुरुषमध्ये ९ पुरुष नोक्टुरियाद्वारा पीडित हुन्छन् ।
नोक्टुरियाबाट बच्न यी उपाय अपनाउनुहोस्ः
क्याफिन वा रक्सी कम मात्रामा खानुहोस्, विशेषगरी सुत्नु अघि
– राती मसालेदार र लिक्विड डाइट लिनबाट बच्नुहोस्
दिउँसो केही घण्टा आफ्नो खुट्टा माथि उठाएर आराम गर्नुहोस् ।
कब्जियतबाट जोगिनका लागि खानामा फाइबरको मात्रा बढाउनुहोस् ।
पेल्विक फ्लोर मसल्स र पिसाब थैलीलाई बलियो बनाउने व्यायाम गर्नुहोस् ।
समस्या बढ्दा डाक्टरलाई पक्कै पनि देखाउनुहोस् ।
जाडोमा छालामा सुक्खापनको समस्या : कारण र समाधान
अपांगता भएकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ : मुख्यमन्त्री पोखरेल
उम्मेदवारी शुल्क महँगो भएको राप्रपा नेताहरुको गुनासो, कसले कति तिर्नुपर्छ ?
राप्रपा महाधिवेशन : २३५ जना प्रतिनिधि अध्यक्षबाट मनोनित (नामावलीसहित)
राप्रपाको संशोधित निर्वाचन कार्यतालिका : आज मनोनयन, भोलि मतदान
आज डलरको मूल्य कति पुग्यो ? यस्तो छ अन्य देशको मुद्राको विनिमयदर
काँग्रेस बागमती अधिवेशन : बिहान ८ बजेबाट मनोनयन दर्ता सुरु
पानी पिउने सही तरिका, कुन समयमा पिउँदा कस्तो फाइदा ?